Kudzima magetsi manufacturers & suppliers - China kudzima magetsi factory
Yakasarudzika Yemafashoni Roller inopofumadza Zebra Mucheka 100% Polyester
Zebra inopofumadza, inozivikanwawo seye muraraungu inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku blinds, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese.
Iine yakasimba-mativi emanzwiro uye inodziya. Iyo mhando yejira haingobatanidze zvakanakira jira uye pajira riya, asi zvakare inosanganisa mashandiro evenetian blinds, roller blinds uye Roman blinds.It inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekuvakira, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye zvimwe nzvimbo. Tine makore anodarika gumi nematanhatu ekugadzira iyo yakanaka uye yepamusoro mhando mbizi jira.
Mufashoni Nyowani Style Zebra Window Roller inopofumadza Mucheka 3m Upamhi
Mbizi Hwindo Roller Blinds Mucheka
Zebra hwindo roller inopofumadza, inozivikanwawo seye zebra inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku inopofumadza, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese.
Hupamhi hwembizi hwindo chinotenderera inopofumadza machira ndeye 3m, uye icho chinhu i100% polyester. Kuchengetedza uye kuchenesa kweGroupeve zebra inopofumadza machira ari pazasi:
1. Ultrasonic yekuchenesa inoita kuti jira rive rakajeka senge nyowani.
2. Vacuum kubvisa uye guruva kubviswa.
3. Shandisa simbi yesimbi yekumwaya panzvimbo inenge masendimita gumi kubva paketeni rejira, iro rinogona kuita kuti guruva ribviswe / kuvharwa.
4. Pukuta kuchenesa ndeyekuti uwane yakadzika yekuchenesa, ndapota shandisa iyo yekutsuka yekuchenesa ine bhurashi musoro kunyoro nyoro. Iwe unogona zvakare kushandisa bvudzi kuomesa (isina kugadzirirwa kupisa) kuti ubvise guruva pakushongedza kwehwindo.
Dkaviri Layer Blinds Mucheka
Double layer blinds, inozivikanwawo sembizi blinds, dimming blinds, sheer blinds, rainbow blinds, masikati nehusiku blinds, sheer blinds, nezvimwewo, zvakabva kuSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa pasi rese. Izvo zvakapetwa zvakapetwa kaviri zvakapetera machira ndeye 100% polyester.
Iyo jira-repiri jira inogona kugadzirisa mwenje isina kugara nzvimbo. Iyo haingobatanidze chete zvakanakira jira uye mesh, asi zvakare inosanganisa mashandiro evenetian blinds, roller blinds uye eRoma blinds. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo.
Zuva Rinochinja Rinogadziriswa Zebra Fabric Kusviba
Zebra inopofumadza, inozivikanwawo seye muraraungu inopofumadza, inopofomadza inopofumadza, yakapetwa-maviri roller roller, masikati nehusiku blinds, nezvimwewo, zvakatangira muSouth Korea uye zvakare vanozivikanwa kwazvo pasirese. Izvo zvinhu zvejira rembizi ndeye 100% polyester.
Mucheka wembizi unogona kugadzirisa mwenje usingatore nzvimbo. Iyo haingobatanidze chete zvakanakira jira uye mesh, asi zvakare inosanganisa mashandiro evenetian blinds, roller blinds uye eRoma blinds. Inoshandiswa zvakanyanya mudzimba, mahotera, maresitorendi, dzimba dzekugara, zvivakwa zvehofisi zvepamusoro-soro uye dzimwe nzvimbo. Ndiyo sarudzo yakanakisa yekuchengetedza zvakavanzika uye kudzora mwenje.